फिटनेस - आजकोNepal
बालबालिकामा मोटोपन बढेसंगै बढ्न सक्छ रोगको जोखिम
३० मङ्सिर २०७७, 9:30 am
अहिलेका बालकालिकामा मोटोपनको समस्या बढ्दो छ । यसमा केही कारण छन् । जस्तो कि, जंकफुड जस्ता खानेकुराको असर । इन्टरनेट, मोवाइल आदिले गर्दा शारीरिक गतिविधि कम हुनु । अक्सर दम्पतीले एउटा मात्र सन्तान हुर्काउनु र…
जाडोयाममा व्यायाम कत्तिको लाभदायी, दिनमा कति व्यायाम उपयुक्त
२८ मङ्सिर २०७७, 12:47 pm
काठमाडौं । नियमित व्यायाम गर्नाले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्ने गर्छ ? यो यस्तो प्रश्न हो जुन प्रायः सबैको दिमागमा आएको हुनुपर्छ । व्यायामले दुवै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो अकाट्य सत्य…
तौल घटाउनका लागि खानुहोस् यी सात खानेकुरा
१९ कार्तिक २०७७, 9:53 am
चिसो मौसममा तात्तातो खानाबाट टाढा बस्न मुश्किल हुन्छ । यो मौसममा मानिसहरु तत्तातो जेरी, लाल मोहन, हट चकलेट खान असाध्यै रुचाउँछन् । चिसो मौसममा मानिसहरुको खान्की पनि बढ्ने दाबी गरिन्छ । यसै कारण यो मौसममा…
मोटोपन कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
१२ कार्तिक २०७७, 3:24 am
मोटोपन बढ्नुमा केही कुरा जिम्मेवर हुन्छ । जस्तो, ऐशआरमपूर्ण जीवन । अत्याधिक र जथाभावी खानपान । मदिरा र मासुजन्य पर्दाको अधिक सेवन । वंशानुगात । मोटोपन भएमा के हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ त, तपाईं-हामीलाई…
पैदल हिँड्दा हुने स्वास्थ्य लाभहरु
२६ असोज २०७७, 3:38 am
कोरोना संक्रमणको कारण अहिले सार्वजनिक यातायात सुरक्षित छैन । भिडभाड हुने सार्वजनिक यातायातभित्र भौतिक दूरी कायम राख्न पनि संभव हुँदैन । यस्तो बेला धेरैको निम्ति सजिलो विकल्प बनेको छ, पैदल हिँड्नु । खासगरी नजिकका गन्तव्यसम्म…
भित्री बस्त्रको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
१९ असोज २०७७, 3:10 am
प्रजनन स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले भित्री बस्त्रको बारेमा संवेदनसिल हुनैपर्छ । भित्री बस्त्र छालामैत्री वा सहज हुनुपर्छ । भित्री बस्त्रका लागि सुती नै सही हुनसक्छ । सुतीको भित्री बस्त्र लगाउँदा सिल्क वा सिन्थेटिकको जस्तो समस्या…